Maamulka Cabdi Raxmaan Faroole oo ku dhawaaqay in ay xariirka u jareen dowlada Federalka Soomaaliya( Aqri war-saxaafadeed) | warsugansomaliya.wordpress.com
Maamulka Puntland ayaa sheegay in uu xiriirka uu la lahaa dowladda Fedaraalka Soomaaliya uu go’ay, waxaana arrintan ay daba socotaa markii dhawana madaxweynaha maamulka Cabdiraxman Maxamad Maxamud (Farole) hadal uu ka jeediyay magaalada Garoowe, halkaasoo ay ka dhacday xaflad lagu maamusayay sannad guuradii 15-aad ee ka soo wareegtay dhismihii maamulkaas.
Tan iyo dhisidii 1998-kii Dowladda Puntland waxay dadaal dheeri ah u gashay inay hirgaliso hey’daha dowliga ah, sharciga iyo kala dambaynta, iyo gaarsiinta adeega bulshada ee shacabka Puntland, iyadoo qeyb wayn-na ka qaadatay dib u dhisida Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya tan iyo 2004-kii. Puntland waxay taageero muhiim ah ku bixisay Soomaaliya iyadoo wakhti, juhdi badan, iyo dhaqaale intaba galisay nabadeynta iyo dib u dhiska Federaalka Soomaaliya.
Dadaalkaani waxaa laga filanayay Soomaaliya cusub oo madaxbanaan, kuna dhisan nidaamka Federaalka iyo xisbiyada badan. Haseyeeshee, tan iyo September 2012-kii markii la dhisay Dowladda Federaalka, dalkii Soomaaliya wuxuu dib ugu noqday colaadihii, barakicintii, qabyaalad iyo kala fogaansho, isqabqabsi siyaadeed, iyo iyadoo tixgalin la’aan iyo xadgudubyo dhinac kasta ah lagu sameeyey Dastuurka Federaalka Soomaaliya, oo kan rasmiga ah ay Saxiixayaashi Roadmap-ka iyo Wakiilka Qaramada Midoobay ku saxiixeen Nairobi June 22, 2012. War saxaafadeedkii ka soo baxay Golaha Amaanka ee Qaramada Midoobay ee July 25, 2012, wuxuu aqoonsaday Dastuurka Federaalka KMG ah ee rasmiga ah, waxaana ku qornayd “inuu soo dhaweeyey hormarkii laga gaaray Roadmap-ka iyo heshiisyada la xiriira, uuna ka mid tahay Heshiiskii June  ee Nairobi Protocols iyo baahinta Dastuurka qabyada ah”.
Iyadoo qiimaynaysa dib u heshiisiinta iyo dib u dhiska dalka, Puntland waxay sii waday wadahadaladii siyaasadeed ay la lahayd Dowladda Federaalka waxayna Puntland soo dhawaysay Rai’sul Wasaaraha Dowladda Federaalka Dr. Cabdi Farah Shirdon safarkiisii Garowe (March 9-11, 2013) iyo Madaxweynaha Dowladda Federaalka Dr. Xasan Shiikh Maxamud safarkiisii Garowe (April 28-29, 2013).
Madaxweynaha Puntland wuxuu qoraalo u diray madaxda Dowladda Federaalka ee ku sugan Muqdisho iyo Qaramada Midoobay, wuxuuna Madaxweynuhu cambaareeyey Dastuurkii Federaalka oo sharcidarada ahaa ee la faragaliyay, Dastuur-beenaadkaasi oo loo qeybiyey Golaha Shacabka (Aqalka Hoose) ee Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya September 7, 2012.
Puntland waxay soo dhaweynaysaa Qaraarkii Golaha Amaanka ee Qaramada Midoobay (UNSC Resolution 2111) ee July 24, 2013, qaraarkaasoo ku dhiirigaliyay Dowladda Federaalka Soomaaliya “inay sameyso barnaamij siyaasadeed oo cad kuna aadan hirgalinta nidaamka federaalka si waafaqsan Dastuurka KMG ah”; sidoo kale, Puntland waxay soo dhaweynaysaa War saxafadeedkii ka soo baxay Shirkii Madaxda IGAD ee May 3, 2013, oo ay ku qornayd mabaa’diidii lagu isku raacay ayna ka mid tahay “Tixgalinta Dastuurka KMG ah ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya”.
Hasayeeshee, si aan waafaqsanayn mabaa’diidii la isku raacay iyo waxyaalihii la filan karay,
1. DFS waxay diiday hirgalinta iyo ku dhaqanka Dastuurka Federaalka KMG ah ee rasmiga ah iyo dib u eegis Dastuur oo sharci ah;
6. DFS waxay diiday inay wax ka qabato burburka dhaqaale oo ay sababtay lacagtii Shillin Soomaaliga oo suuqa ku yaraatay, iyadoo daabacaada lacag cusubi ay tahay mas’uuliyadda Dowladda Federaalka;
8. DFS waxay taageertaa kooxaha khalkhalgelinta oo ka qeybqaata kicinta iyo degenaansho la’aantasiyaasadeed ee deegaanada dalka Soomaaliya;
9. DFS waxay inkirtay dib u heshiisiinta qaran iyadoo diiday wax ka qabadka barakicinta iyo dib usoo celinta hantidii la kala boobay tan iyo dagaaladii sokeeye ee bilawgii 1990s;
10. DFS waxay tarjumaad khaldan ka bixisaa dalka iyo dadka Soomaaliya goobaha caalamiga ah iyadoo ku guuldaraysatay soo bandhigidda arrimaha qaran ee muhiimka ah.
Sidaa darteed, Dowladda Puntland waxay hakinaysaa wadashaqayntii iyo xiriirkii ay la lahayd Dowladda Federaalka Soomaaliya, tan iyo intii ay Dowladda Federaalka:
3. Hirgalinta hey’adaha amniga si loola dagaalamo kooxaha xagjirka Al Shabaab iyo wixii khatar ku ah nabada iyo xasiloonidda deegaanada Soomaaliya.
← War deg deg ah: gudoomiye ku-xigeenkii degmada wardhiigleey oo daqiiqado ka hor ladilay.
In ka badan 19 Safaaradaha Mareeykanka ah ee ku yaal Caalamka oo Albaabada la iskugu dhuftay (Daawo Muuqaal+Warbixin) →